DISTRIKAN’AMBANJA : Trano lehibe iray may kila forehitra, fianakaviana miisa 6 no traboina
Nisavorovoro vokatry ny afo nijoalajoala ny iray tanàna tao amin’ny fokontanin’Ankatafahely Distrikan’Ambanja, omaly, tokony ho tamin’ny 12 ora antoandro. 13 mars 2019
Trano lehibe iray no may kila forehitra, izay mbola tsy fantatra mazava ny tena antony niavian’ny afo. Levon’ny afo tsy nisy noraisina intsony ny entana rehetra tao anatiny. Soa ihany aloha fa tsy nisy naratra na koa namoy ny ainy. Ireo fianakaviana miisa 6 nipetraka tao anatiny no lasa tsy manan-kialofana satria foana tampoka tao anatin’ny fotoana fohy ny fananan’izy ireo. Ireo mpamonjy voina tao an-toerana no niara-nifarimbona tamin’ny famonoana haingana ny afo. Mba tsy niitatra tamin’ny trano hafa intsony ny firehetana fa nalaky voafehy.
Mangataka amin’ny tompon’andraikitra moa ireto farany mba hijery akaiky ireto traboina ary koa manainga mavesatra ireo malala-tanana rahateo koa fa horaisin’izy ireo an-tanan-droa ny fanampiana ary efa misaotra sahady izay vonona ny amin’izany. Efa misokatra ny fanadihadiana momba ny nahatonga ny firehetana hatreto.
Mpizahatany voatafika, vazaha vavy iray voatifitra, lasan’ny jiolahy ny vola 600 euros TSINGIN’I BEMARAHA (250) 20 mai 2019 Tamin’ny alalan’ny « Gps » no nahatrarana ireo jiolahy HALATRA MOTO TENY SOAVIMASOANDRO (194) 22 mai 2019 Nitsoaka ny fonja ilay tovolahy nitifitra azy TOVOVAVY IRAY MATY NISY NAMONO TANY TOLIARA (177) 22 mai 2019 Ravan’ny polisin’ny Fip ny tambajotran’ny mpamaky trano ny alahady 19 mey lasa teo TOAMASINA (160) 20 mai 2019 Mampihena ny tahan’ny olona mamonjy toeram-pitsaboana TSAHO MIELY MOMBA NY HOPITALIM-PANJAKANA (157) 20 mai 2019 Vehivavy iray tratran’ny fokonolona nangalatra sy namaky trano AMBALABE TOAMASINA (150) 23 mai 2019